ဟုတ်ကဲ့၊ သင် (နှင့်သင့်သည်) မည်သည့်ကလေးမဆို LEGOLAND သို့သွားနိုင်သည်
17 / 09 / 2021 17 / 09 / 2021 မင်းသမီး Emma Kennedy 230 Views စာ4မှတ်ချက် ဘီလ်ဒန်, ကြောကျတိုငျ, မင်းသမီး Emma Kennedy, Lego, LEGO House, ဥပဒေ, LEGOLAND ဝင်ဆာ, LEGOLAND ဝင်ဆာအပန်းဖြေစခန်း, သဘော, အုတ်တွေနဲ့အနားယူပါ
စာရေးသူ၊ ဇာတ်ညွှန်းနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူပရိသတ် Lego Emma Kennedy က LEGOLAND မှာပျော်စရာကောင်းတဲ့နေ့တစ်နေ့ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့ကလေးတွေကိုဆွဲခေါ်ဖို့မလိုဘူးဆိုတာသက်သေပြတယ်။
မင်းမှာရေခဲမုန့်လိမ်းကျံထားတဲ့ကလေးအနည်းဆုံးတစ်ယောက်ရှိရင်မင်း LEGOLAND ကိုသွားလို့မရဘူးဆိုတဲ့မပြောရသေးတဲ့စည်းကမ်းတစ်ခုရှိတယ်။ ၎င်းသည်အခြားအပန်းဖြေဥယျာဉ်နှင့်မသက်ဆိုင်သောစည်းကမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်သွားရန်စဉ်းစားသည်ကိုမကြာခဏဆိုသလိုပြောပါ၊ AFOL မဟုတ်သောသူတို့သည်သူတို့၏မျက်လုံးများကိုကျဉ်းမြောင်းစေပြီးသင့်အားမေးလိမ့်မည်-“ သင်မည်သည့်ကလေးများကိုယူသနည်း။ နေ့ချင်းပြန်ခရီးတွင်ကျောင်းသားများကိုလိုက်ပို့ခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။
ဒါပေမယ့်မှာ အုတ်တွေနဲ့အနားယူပါThor of Hammer နဲ့စည်းမျဉ်းစာအုပ်ကိုငါတို့ဖြိုပစ်လိုက်၊ အပိုင်းအစတွေကိုလေထဲကိုလွှင့်ပစ်လိုက်ပြီးအငွေ့ပျံအောင်လုပ်ရတာကြိုက်တယ်။ စည်းမျဉ်းများ၊ စည်းကမ်းများ။ ငါတို့ LEGOLAND ကိုသွားရမယ့်ကလေးတစ်ယောက်ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။
ငါတို့ AFOLWAC (လူကြီးပရိတ်သတ်တွေအတွက်) စီစဉ်ပြီးပြီ Lego Chums ကဘယ်သူလဲ) နေ့ချင်းပြန်ခရီးအတွက်အချိန်အနည်းငယ်ပေးပြီးငါတို့အားလုံးကိုရူးရူးမူးမူးချစ်ခဲ့တာ Legoရွေးချယ်မှုတစ်ခုသာအမြဲရှိလိမ့်မည်။ တစ်နေ့ငါတို့ပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီးငါတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် Valhalla, the ခရီးကိုသွားမယ် Lego Billund ရှိအိမ်၊ သို့သော်ထိုမင်္ဂလာရှိသောနေ့မတိုင်မီအထိကျွန်ုပ်တို့သည် LEGOLAND Windsor ၏သန့်ရှင်းသောခန်းမများသို့ဘတ်စ်ကားများ၊ ရထားများနှင့်ကားများဖြင့်ခရီးဆက်ခဲ့ကြသည်။ ၎င်းသည်ရေပြင်ကိုစမ်းသပ်ရန်၊ ကြည်နူးဖွယ်ကောင်းသောအဖျော်ယမကာအဖြစ် သုံး၍ ကျွန်ုပ်တို့အားပထမဆုံးအသားဖြင့်ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
“ ကလေးတွေမရှိစေရဘူး” လို့ပြန်ပြောတယ်၊ လက်နှစ်ဖက်ကိုခေါက်ပြီးနေကာမျက်မှန်တပ်ထားတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့တခါတလေမှာပြင်းထန်တဲ့နေ့ခရီးတွေကပြင်းထန်တဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေလိုအပ်တယ်၊ တစ်ချို့ကတကယ်ကောင်းတဲ့စီးနင်းမှုတွေအားလုံးမှာစစ်တပ်နဲ့အတူလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရတာပါ။ တိကျမှု၊ အရွယ်ရောက်သူကိုးယောက်သည်မည်မျှကြာရန်လိုသည် Lego ဆိုင် အဆုံးမှာ။
ငါတို့ကရူးသွပ်တဲ့သင်္ဘောသားတစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပြောဖို့ကအထင်သေးစရာဘဲ။ ခုန်ပေါက်ခြင်း၊ ပွေ့ဖက်ခြင်း (သူတို့ကိုမှတ်မိလား)၊ နူးညံ့သောအော်သံနှင့်ပျော်ရွှင်သောမျက်ရည်အချို့ ဒီမှာငါတို့အိမ်သာရှေ့ selfie ရိုက်နေတာကြာပြီ။ ငါတို့ကသာပြီးအောင်လုပ်ခဲ့တယ်။ ငါတို့ LEGOLAND မှာနေတယ်၊ ​​နေရောင်ကတောက်ပနေပြီးငါတို့ကိုင်ထားတဲ့အရာအားလုံးကကျောပိုးအိတ်တွေထုပ်ပိုးထားတဲ့နေ့လည်စာတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်။ ဒါဟာမင်္ဂလာရှိပြီးသားပါ၊ ငါတို့တောင်မ ၀ င်ရသေးဘူး။
လူကြီးများအတွက်တစ်ရက်ခရီးအကြောင်းလွတ်မြောက်စေသောအရာတစ်ခုရှိသည်။ မင်းစိတ်အလိုကိုလိုက်ပြီးစိတ်ပြောင်းနိုင်တယ်၊ ပိုစတာတွေပေါ်မှာဂူဂယ်လ်မျက်လုံးတွေကိုကပ်ထားပါ (အဲဒါဆိုဘယ်သူလုပ်တာလဲ။ )၊ ရုတ်တရက်အော့အန်တာတွေ (ခဏလောက်ပိုကြာ) မစိုးရိမ်ပါနဲ့၊ သင်ရေခဲမုန့်များများစားပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်အတွက်အကြီးမားဆုံးသောပျော်ရွှင်မှုမှာနောက်ဆုံးတွင် lockdown ကာလအတွင်းအွန်လိုင်းမိသားစုဖြစ်လာသောသူများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းဖြစ်သည်။
သူတို့သည် AFOLWACs များဖြစ်ကြပြီးကျွန်ုပ်ကိုတွေ့။ ကျွန်ုပ်နှင့်အတူမှီဝဲခဲ့သည်။ ငါနေ့တိုင်းစကားပြောနေတဲ့ဂိုဏ်းဝင်တွေ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏သေးငယ်သော်လည်းစုံလင်စွာဖွဲ့စည်းထားသောအင်တာနက်ထောင့်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးခဲ့သောအရာအားလုံး၏ကျောရိုးဖြစ်သည် Lego သူတို့ကိုယ်သူတို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်၊ တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းနဲ့ပြန်ကစားပုံကိုသင်ယူပါ။
သင်ဟာအရွယ်ရောက်သူတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်ချစ်တတ်သည် LegoLEGOLAND ကိုသွားဖို့အတွက်ကလေးတစ်ယောက်မလိုပါဘူး။ မင်းလိုအပ်တာအားလုံးဟာ minifigure တိုင်း၊ တောက်ပတဲ့အရောင်ပုံစံ၊ Miniland ရဲ့အုတ်တွေတိုင်းကိုနှစ်သက်မယ့် LEGOLAND-exclusive အစုံဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုဆွေးနွေးငြင်းခုံဖို့စဉ်းစားစရာမလိုပါဘူး။ (အဖြေ: လူမိုက်ကအိမ်ရှေ့တံခါးကနေမင်းဝင်နိုင်သလောက်အများကြီးပဲ။ )
ငယ်ရွယ်သူများထက်လူကြီးများနှင့်ပိုမိုသင့်တော်သောပျော်ရွှင်စရာ VIP အတွေ့အကြုံများရှိပါသည်။ စံပြအလုပ်ရုံသို့သီးသန့်အလည်အပတ်သွားခြင်းနှင့် Miniland ဧည့်ခံသောခရီးတစ်ခုလက်ဆောင်ပေးခြင်းတို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အံ့သြခဲ့ရသည် (ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Dawn French၊ သင် အေးခဲတဲ့ချစ်သူ) ငါတို့ကသစ်မွှေးပန်းပွင့်ပေါ်မှာစိုစွတ်ပြီးဂရုမစိုက်ခဲ့ဘူး၊ ငါတို့နဂါးအပေါ်ငါတို့ရင်ဘတ်တွေနာကျင်တဲ့အထိရယ်ရယ်မောမောနဲ့ငါတို့တစ်ယောက်ချင်းစီကလွဲရင်ဘာမှမလုပ်ဘဲအကောင်းဆုံးနေ့ကိုဖြတ်သန်းခဲ့တယ်။ အဲဒါဘုန်းကြီးပဲ။
ပညာရှိကိုပြောပါ၊ သင်အဆုံး၌ဆိုင်၌ ၄၅ မိနစ်လိုအပ်သည်၊ သင်ဘာပဲလုပ်လုပ်၊ သင်အန်ချင်စိတ်ပူနေလျှင်၊ သရဲအိမ်ကိုစီးပါ။
← LEGO ဒဏ္taleာရီပုံပြင်များကို Bricktober 2021 အတွက်ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်
Lego Star Wars တိုက်ပွဲများဖြန့်မည့်ရက်ကိုအတည်ပြုသည် →
အပေါ်အတွေး ၁၂၂ ခုဟုတ်ကဲ့၊ သင် (နှင့်သင့်သည်) ကလေးများမပါဘဲ LEGOLAND သို့သွားနိုင်သည်"
Maria Muñoz Arbeláez
This is great to read!! I will go with two of my friends and we were afraid if the park was worth it! After reading this, I’m exited to go now 😀
သူ့မှာကလေးတွေအပြင်မှာလူကြီးတွေရှိနေတာဝမ်းသာပါတယ်artဘာ့ကြောင့်ဖြစ်တာလဲ။ ကလေးတွေအားလုံးပျော်စရာရှိရမယ်။ ငါဒီမှာတခြားသူတွေကမင်းကိုအရမ်းအသက်မကြီးဘူးလို့အမြဲပြောတတ်တယ်။ အရာရာတိုင်းအတွက်အသက်ကန့်သတ်ချက်ရှိဖို့ဘာကြောင့်လိုတာလဲ။ Lagos နဲ့ကစားဖို့ငါအရမ်းအသက်ကြီးမယ်မထင်ဘူး။
Legoland ပန်းခြံကြီးတစ်ခုလုံးကိုကလေးများမပါဘဲလူကြီးများဖွင့်ထားသည်ကိုသတိပြုရန်အရေးကြီးသည်၊ Legoland Discovery စင်တာများမဟုတ်ပါ။
အလျှော့ပေးပန်းခြံလက်မှတ်များ ၀ ယ်ရန် VIP အမှတ်ကိုသုံးရန်မျှော်လင့်သူမည်သူမဆိုမဖော်ပြနိုင်သောကန့်သတ်ချက်မှာပန်းခြံများသည်ဘောက်ချာလျှော့စျေး (သို့) ကူပွန်များကိုမည်သည့်နေ့၌လက်ခံသည်ကိုသင်လက်ခံလိမ့်မည်ကိုသင်မသိပါ။ သင်၏ VIP အမှတ်များကိုရွေးပြီးပန်းခြံတွင်သင်၏ကုဒ်ကိုသုံးရန်ကြိုးစားပါ။
ပြီးနောက် Lego Group Legoland ပန်းခြံများကလက်မှတ် ၀ ယ်သော ၀ န်ဆောင်မှု၏ဆိုးရွားသောအဆင့်တွင်ရှက်သင့်သည်။
18/09/2021 at 08:57
ငါနဲ့ငါ့သူငယ်ချင်းကလွန်ခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်နှစ်ပတ်ကကလေးတွေမပါဘဲ legoland ကိုသွားခဲ့တယ်